ग्राफिक डिजाइनरका लागि उपयोगी उपकरणहरू क्रिएटिव अनलाइन
ग्राफिक डिजाइनरका लागि उपयोगी उपकरणहरू
एलिसिया गोन्जालेज | | ग्राफिक डिजाइन
इन्टरनेट को लागी धन्यवाद, त्यहाँ अनन्त छन् वेबसाइटहरू र उपकरणहरू जसले डिजाइनरको कामलाई सजिलो पार्दछ। जान्नु र तपाईंलाई बढी उत्पादक र कुशल हुन मद्दत गर्न विभिन्न स्रोतहरू उपलब्ध हुनु महत्त्वपूर्ण छ।
यहाँ केहि छन् नि: शुल्क उपकरणहरू तपाईको अर्को डिजाइनका लागि यो धेरै उपयोगी छ।
1 रंग प्यालेटहरू
1.1 रंग कोड
2 छवि बैंक र आइकनोग्राफी
कलरकोड एक धेरै उपयोगी र मनोरन्जनकारी उपकरण हो। बहु विकल्पहरूको साथ, प्रयोगकर्ताले खोजी गर्न सक्दछ रंग संयोजन त्यो तपाइँको सबै भन्दा चासो। यो ती दिनहरूको लागि आदर्श हो जब एकमा प्रेरणाको अभाव हुन्छ। थप रूपमा, वेबले तपाईंलाई प्यालेट डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ, साथै .sass, .less, .styl र .css कोड डाउनलोड गर्न।
यो उपकरण धेरै उपयोगी छ यदि तपाईं चाहानुहुन्छ प्राप्त गर्नका लागि आदर्श प्यालेट निश्चित विषयको लागि। तपाईंले भर्खर अवधारणा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ र उपकरणले तिनीहरूको सम्बन्धित प्यालेटको साथ धेरै संख्यामा छविहरू उत्पन्न गर्दछ। एक आदर्श विकल्प के हो भने के एक प्रेरणा पाउन को लागी हो।
एक उपकरण जुन कलरकोडसँग मिल्दो जुल्दो काम गर्दछ। सुरुमा स्वचालित रूपमा प्यालेट उत्पन्न गर्दछ। त्यहाँबाट, प्रयोगकर्ताहरूले प्रस्तावहरूको प्रत्येकलाई परिवर्तन गर्न सक्दछन् जब सम्म उनीहरूले खोजिरहेका छैनन्। उत्तम प्यालेट प्राप्त गर्न धेरै विकल्पहरू प्रस्ताव गर्दछ.
यो सायद चार मध्ये सबैभन्दा जटिल उपकरण हो। यो एक र gene्ग जेनरेटर मात्र हो, तर यसले संख्या प्रदान गर्दछ जानकारी तपाइँलाई रुचि छ कि रंग को बारे मा। र schemes्ग योजनाहरू, रूपान्तरणहरू, संयोजनहरू ... कुनै श doubt्का बिना सब भन्दा चाखलाग्दो उपकरणहरू।
छवि बैंक र आइकनोग्राफी
Unsplash एक छवि बैंक हो जहाँ तपाईं पाउन सक्नुहुन्छ व्यावसायिक फोटोग्राफहरू र उत्कृष्ट गुणस्तरको। जे होस् यो नि: शुल्क नि: शुल्क हो, यो समुदाय हो जहाँ फोटोग्राफरहरूले उनीहरूको काम अपलोड गर्दछ ताकि प्रयोगकर्ताहरू उनीहरूको उपयोग गर्न सक्दछन्।
अर्को पूरै निःशुल्क छवि बैंक। यहाँ हामी फेला पार्दछौं नि: शुल्क उच्च-गुणवत्ता फोटोहरू। यो फिल्टर को एक विस्तृत विविधता प्रदान गर्दछ ताकि प्रयोगकर्ताले वास्तवमै उनीहरूलाई चाहिने चीज फेला पार्न सक्दछ।
फ्रीपिक डिजाइनरहरूको लागि धेरै उपयोगी र व्यावहारिक सामग्री वेबसाइट हो। यहाँ तपाइँ दुबै छवि र भेक्टरहरू भेट्टाउनुहुनेछ। तपाईंलाई विभिन्न ढाँचामा फाइलहरू डाउनलोड गर्न अनुमति दिँदछ अनुकूलित वा परिमार्जित। यो एक धेरै भ्रमण गरिएको वेबसाइट हो र विशेष र उच्च गुणवत्ता सामग्री प्रदान गर्दछ। कुनै ग्राफिक कुनै पनि ग्राफिक डिजाइनर को लागी सबैभन्दा उपयोगी उपकरणहरु मध्ये एक छ।
फ्रीपिक जस्तै समान उपकरण। यो एक वेबसाइट हो जहाँ डिजाइनरहरूसँग उनीहरूको डिस्पोजेन्ट फन्टहरू, भेक्टरहरू, रंग प्यालेट, PSD फाईलहरू र अधिक।
यो प्रयोग गर्न सहज छ; एकचोटि प्रयोगकर्ताले उनीहरूलाई के भेट्टाए पछि डाउनलोड प्राप्त गर्न उनीहरूले आफ्नो ईमेल प्रविष्ट गर्न आवश्यक छ। व्यावहारिक र स्वतन्त्र.
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ग्राफिक डिजाइन » ग्राफिक डिजाइनरका लागि उपयोगी उपकरणहरू
ईन्टरनेटमा सब भन्दा मान्यता प्राप्त लोगोमा एउटा रेट्रो टच
Books पुस्तकहरू हरेक डिजाइनरले थाहा पाउनुपर्दछ